DHEGEYSO-Madaxweyne Gaas oo ka hadlay askar lasheegay in Dacish afduubatay. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Madaxweyne Gaas oo ka hadlay askar lasheegay in Dacish afduubatay.
Janaayo 28, 2017 8:52 g 0
Garowe Jan 29 2017-Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hadlay afduub kooxda Daacish ugeysatay dad shacab ah oo ku safrayay deegaano hoos yimaada degmada Qandala ee gobolka Bari.
Madaxweyne Gaas oo waresysi kooban siiyay BBC, ayaa xaqiijiyay afduubkaan loo gestay dadka shacabka ah, wuxuuna cadeeyay inay kooxaha argigixisadu maleegayaan shirqoolo iyo afduub ka dhan ah shacabka ah , kadib markii sida uu sheegay looga itaal roobaaday dagaalkii looga xoreeyay Qandala.
Wuxuu madaxweynuhu meesha ka saaray inay xaalad nabad gelyo darro ka jirto dhulka uu ku safrayo ee bariga Fog iyo agagaarka Qandala, taasoo cabsi ku keeni karta in gargaar la gaarsiiyo dadka abaaruhu saameeyeen.